Lety eh, ny tena efa tsy manam-bola indray ty mbola idiran'ny blem hafa! Ny antony mahatonga izay - 1er Pas - Transformez ce rêve en realité
Raha vao olombelona nofo sy ra dia tsy maintsy miaina ny mamy sy mangidy foana. Milamindamina androany dia rampitso misy olana indray. Voky androany dia rampitso noana. Nahita olon-tiana androany dia rampitso miady, nanangana orin’asa ny androany dia rampitso faillite, salama androany dia rampitso marary dia ohatran’izay foana. Fa ny tena blem be de ity: mbola tsy voavaha ny olana iray eto dia iny fa tonga indray ny hafa, any ka lasa mamaha ny olana foana ny atao mandritry ny andro iainana, tsy mahatsapa izany fahasambarana izany. Fa maninona tokoa eh?
Tonga dia vavany fa tsy holava resaka aho androany 🙂
Ianao ihany no mahatonga ny problème tsy mety afaka aminao io, ianao ihany mahatonga anao marary lava io, ianao ihany mahatonga anao mijaly ara-pitiavana io,… fa raha ampiako hoe ianao ihany matonga anao tsy an’asa io dia tonga dia commentaire tsy mety hotapitra mihitsy eo izao fa satria ny fanjakana zao, ny politika zao, ny mahafantatr’olona zao, de be dia be no valiny eo fa bon, hiverina amin’ny resako amin’izay aho.
Valiny fidinana dia fiakarana
Raha ny lalana dia izay tokoa, fa misy ny an’olona midina foana tsy mety miakatra mihitsy dia misy koa miakatra foana tsy mieritreritra hidina: « Les riches s’enrichissent et les pauvres s’appauvrissent ». Ka inona mahatonga izay??? Ny manankarena miantso vahaolana, dia ny mahantra miantso olana. Oui, izay mihitsy ilay izy, io blem mahazo antsika isan’andro bilitika kely io fa fandanian-tsika fotoana lalina mieritreritr’azy mahatonga azy miangeza dia farany sempotriny blem na sempotrin’ny fahasoavana.
Ny an’olona futur millionnaire na koa millionnaire, isakin’ny misy olana dia mitady vahaolana sady raisiny expérience hoazy iny mba entiny hanatsarany ny hoaviny. Fa ny an’ny futur 0,millionnaire vao misy blem de hoe de ity foana ve ny fiainako ity na koa hoe letyeh ny eto aza tsy voavaha de iny fa misy blem hafa ndray!! Dia aveo kivy, malemy dia farany manontany hoe: « Andriamanitr’ô fa dia inona loatra mahazo ahy ity? ».
Ny toro-hevitra tiako ampita amin’izay dia izao:
1) Meteza ho responsable ny tenanao
Raha vao sendra olana dia mahamaika antsika dia mitady respo hialana bala. Noho ny ray aman-dreniko miady lava ihany nahatonga ah otran’izao. Noho ny fitondrana tsy mamely ihany…,noho ny sipako na ny vadiko ihany no, noho ny mpampiasako, noho ianao ihany nahatonga izao, noho noho izay foana. Raha ahilikao amin’olona foana io olana mahazo anao io dia mbola hiaina an’io foana ianao mandra-pahantitra anao, fa mieteza ho respo, dia aveo ianao mijery hoe inona kay nahatonga an’iny? inona no tsy nety nataoko? Ahoana no hanitsiako an’izay? Dia lasa io. Efa nanao izay hoafany ny ray aman-dreninao nampianarana anao arakin’izay tratrany ka anjarao no manohy azy. Efa nanao zay heriny ny olon-tinao anome asambarana anao ka anjaranao no manohy izay fahasambarana izay fa tsy miandry lava any aminy foana. Efa io no zava-misy eto amintsika, ny mampivoatra ity firenentsika ity dia ny fampivoaranao ny tenanao dia avy eo ny sehatra misy anao dia tafa.
2) Manàna toe-tsaina Positif PP by…
Rehefa vita izay hoe mipetraka tompon’andraikitra ny tenany izay dia ny faharoa dia oe ajanony io toe-tsaina negatif tsy mampivoatra io. Ajanony ny fandianiam-potoana mieritreritra zavatra tsy tianao hotanteraka amin’ny fiainanao io.
» Misy namana anankiray izay, niteraka voalohany zareo dia maty mbola kely fa narary dia izao nanan-janaka izao ndray noho ny fahasoavan’ny tompo. Ankehitriny dia ao anatiny tsy fahasalamana ihany koa io zanakin’ny zareo io, izay angataham-bavaka hoanareo mpamaky rehetra an’ito Blog ito. Noho izy efa voa moa dia lasalasa ihany ni fisainany hoe sao dia mba otran’ny teo koa ny hiafaran’ity zanako ity. Dia anisany conseiller-ko azy dia raha tianao hotanteraka aminareo izany zavatra izany dia eritrereto foana. Kanefa inona no vokatr’izay?? Vao maika mamparary ny zaza. Fa ny conseil nomeko azy ary efa nomeko ny olona hafa be dia be dia hoe izay zavatra tsara tianareo hotanteraka aminareo no andanio fotoana mieritreritr’azy. Immaginer-o sahady hoe efa mianatra ny zanakareo, dia ny hafalianareo amin’izany rehefa tonga no hiaino dieny izao. Dia tanteraka io. »
Dia ohatran’izay koa ireo tsy an’asa maro eto amintsika. Ahoana moa ianao no voaray miasa, ianao aza manatitra CVnao efa kivy sahady kou?: « Ataotao any ty fa tsy de misy espoir firy amin’iny aho ». Dia izay tokoa no valiny aveo fa nampita message any amin’ny tompon’ny orin’asa ianao hoe aza rarahiana aho.
Dia ohatran’izay koa ianao mijaly aram-pitiavana. Satria efa voa dia tsy te hovoa intsony dia mailo be any ka ny olom-baovao tokony hanome fahasambarana hoanao ihaihaina dia zay tokoa no tanteraka après.
Lava loatra fa ajanoko eto, izay zavatra eritreretinao ihany ka andanianao fotoana be ny mieritreritra an’iny no tanteraka aminao na ratsy io na tsara. Fa ny olana dia tsy maintsy misy fa anjaranao no mandray azy hoe epreuve vao hatrehana io na blem i-sacrena. Rehefa te hanana asa tsara ianao dia hiaino dieny izao izay hafaliana amin’izay rehefa tonga ny fotoana dia tanteraka io. Te hanana olon-tiana sady be fitiavana no mahay manaja ny tiany, hiano dieny izao izay hafaliana izay. Tsy te hijaly amin’ny resaka vola, imaginer-à ary hiaino izay hafaliana manam-bola be izany dia tanteraka io. Te hanan-janaka?? De ohatran’izay foana ny atao.
Raha mila fanazavana fanampiny amin’ny olana mahazo anao manokana, azonareo atao tsara ny mifampiresaka amiko amin’ny alalàn’ny message na mihaona mivantana.
Il est où le bonheur?? Betsaka no diso fijery amin’ity resaka bonheur ity!!